SHACABKA ITOOBIYA OO LAGU WADO INUU GAADHO 173 MILYAN SANADKA 2050 | Toggaherer's Weblog
Qaramada Midoobay xafiiskeeda u qaabilsan tirakoobka dadka Adduunka dushiisa ku nool ayaa soo saaray wadar guud oo la filayo in ay shacabka Caalamka uu gaadho sanadaha soo socda.
Warbixintan oo ah saadaalin lagu sameeyey koriinka ummada ku kala dhaqan dalalka soo koraya iyo kuwa kale ee horumaray ayaa lagu sheegay in sanadka 2012 ay gaadhaan dadka caalamka ku nool 7 Billion oo qof, halka ay hada dadka caalamka ka nool ay yihiin 6.8 billion oo qof.
Baaritaankan ayaa sidoo kale lagu sheegay in koriinka tirada dadka caalamka ee sadexda sano ee soo socota ay ugu badnaan doonaan dadka ku nool wadamada soo koraya ee gaar ahaan Asia iyo Afrika.
Wadamada sida weyn isha loogu hayo waxaa kamid ah dalka Itoobiya ee jaarka la ah Soomaaliya, ayadoo tirakoobka dalkaasi hada laga wado la qiyaasayo in shacabka dalkaasi uu labo jibaarmo sanadaha soo socda.
Sanadkan 2009 ayaa lagu qiyaasay dadka ku dhaqan dalka Itoobiya 82,825,000 (Sideentan iyo Labo milyan, sideed boqol labaatan iyo shan) qof. Tiradan ayaa ah mid sare usii kacday si xawli ah sanadihii lasoo dhaafay marka loo eego sanadkii 1950kii oo ay dalka Itoobiya dadka ku nool ay ahaayeen 18,434,000 (sideen iyo toban milyan, afar boqol iyo sodon iyo afar) qof oo kaliya, taasi oo muujineysa sida dar dartaleh oo ay u kordhayaan shacabka dalkaasi.
Sanadka 2050 ayaa la filayaa in shacabka ku dhaqan dalka Itoobiya ay gaadhaan 173 milyan oo dad ah taasi, oo ah mid saameyn ku yeelan doonta qaarada Afrika marka la eego tirada sii koreysa ee shacabka Qaarada ku dhaqan.
Shacabka oo bata ayaa la filayaa inuu saameyn ku yeesho deegaanka taasi oo sare usii qaadi karta dagaalada ka dhaca Afrika iyo waliba u tartanka dhulka iyo waliba Biyaha oo ah mida ugu muhiimsan oo laga cabsi qabo in uu yimaado BIYO yaraan baaxsan.
Dalka Soomaaliya ayaa isha ugu muhiimsan ee biyaha soo gaadha Beeraha dalkaasi ay ka yimaadaan labada wabi ee Shabeele iyo Jubba ee ka yimaada dalka Itoobiya, ayadoo ay hada socdaan qorshayaal ay dowlada Itoobiya wado inay farsameyso isticmaalka biyaha wabiyada dalkeeda.
Dalka Soomaaliya oo ay hadheeyeen dagaalada 19kii sano ee lasoo dhaafay ayaa kamid ah dalalka sida tooska ay u saameyn doonaan bulshada sii fideysa ee Itoobiya, ayadoo aysan hada jirin tiro rasmi ah oo lagu qiyaasi karo koriinka shacabka Soomaaliyeed oo in badan oo kamid ah sanadihii lasoo dhaafay ku dhimanayey dagaalada. Waxaana lagu qiyaasaa in Soomaalida ku dhaqan gudaha Soomaaliya ay hada gaadhayaan 10 million.